Beeraha baradhada ee gobolka Nizhny Novgorod
Jun 24, 05:08
в Wararka gobolka, Injineerinka / Teknolojiyada
Vasily Puchkov, wakiilka LLC "GRIMME-RUSSIA" oo hoos yimaada Degmadda Dhexe ee Dhexe
Gobolka Nizhny Novgorod waa gobol leh taariikh fog oo lagu beero baradhada iyo khudradda. Gobolku wuxuu si buuxda u bixiyaa baradhada, tanina waxaa ugu wacan shirkadaha ganacsiga oo looga doodi doono qodobkaan.
1800 ha ka yar baradho sanadkii 2020
Soosaaraha ugu weyn ee baradhada gobolka Nizhny Novgorod.
Beertu waxay ku taalaa tuulada Kozhino, degmada Arzamas. Muddo ka badan 28 sano, shirkadda waxaa hogaaminayay Evgeny Evgenievich Latkin.
Dhammaan howlaha shaqada ee Evgeny Evgenievich waxay ku xiran yihiin beeraha. Sanadkii 1992, wuxuu abaabulay dhaqaale (Beeraley) dhaqaale, laga soo bilaabo 2003 ilaa iyo hada wuxuu madax ka yahay shirkad weyn in ka badan 95 shaqaale.
Khadadka dhan ee qalabka lagu beero laguna kaydiyo baradhada beerta waa astaanta GRIMME. Soo degista waxaa lagu fuliyaa mashiinnada soo dejinta 4- iyo 8-saf, nadiifinta - isku-darka iyo is-isku-darka. Qufulkii ugu horreeyay ee ruushka GRIMME RH PowerCombi oo ku qalabeysan Tomra FRA (Field Potato Sorter) aaladda gooni u goosadka ah ee heer sare ah ayaa loo isticmaalay dhigashada keydka beerta. Khabiirka qalabka FPS wuxuu baari karaa shay kasta, duulimaadka, qeyb labaad, isagoo ogaanaya buuryo, dhagxaan iyo waxyaabo kale oo ajnabi ah oo lagu riixayo iyagoo gacan ka siinaya faraha.
Waxyaabaha soo koray ayaa lagu meeleeyaa baakado baradho casri ah (wadarta mugga keydinta - 40 kun oo tan, oo ku qalabeysan habab hawo toos ah).
Ka sokow beero baradho, Latkin LLC ayaa sidoo kale socodsiisa. Sannadkii 2008, warshad yar oo loogu talagalay nadiifinta khudaarta iyo baakadaha faaruqinta ah waxay bilaabeen shaqadooda beerta, oo sanadkii 2014 qalab isku dhafan oo loogu talagalay diyaarinta baradhada iibinta ka hor ayaa la hawlgaliyey (dhaqitaanka, nadiifinta iyo baakadeynta badeecada ilaa 3 kg).
Meelaha ugu muhiimsan ee dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha waa soosaarka abuur. Laga soo bilaabo Abriil 2012, Latkin LLC waxay abaabushay waxsoosaarka minitubers jawi la xakameeyay (phytotrons). Barnaamij kombiyuutar u gaar ah wuxuu caawiyaa joogtaynta xaaladaha nololeed ee ugu wanaagsan dhirta. Lix wareeg oo wax soo saar sanadkii ayaa la sameeyaa.
1100 ha ka yar baradho sanadkii 2020
Mid ka mid ah qoysaska ugu horumarsan gobolka. Waxay ku taal meel u dhow tuulada degmada Vyalovskaya Gorodetsky.
Aksentis LLC ayaa shaqadeeda bilaabay Febraayo 2012. Laga bilaabo waqtigan ilaa maanta, shirkadda waxaa madax u ah Anton Ilsurovich Mingazov.
Markii hore, beerta ku takhasustay beerista baradho la suuqgeyn karo; hadda waxay ku sii jihaysan tahay soo-saarka abuur.
Asalka, miraha iyo taranka dhalinta waxaa loo soo saaray dadka ugu waaweyn ee shisheeyaha ah iyo kuwa Ruushka - sida HZPC Sadokas, Stet Holland BV, FritoLay, Lam Weston Belaya Dacha LLC.
Isugeynta dhul beereedka LLC Aksentis waa 5200 ha. Shirkadda ayaa shaqeysa in kabadan 160 qof. Shaqaalaha aqoonta u leh iyo maareynta waxtarka leh waxay xaqiijinayaan horumarka xasilloon ee shirkadda. Qaab mas'uul ah oo loo wajaho ganacsiga, adeegsiga tikniyoolajiyadda casriga ah iyo qalabka casriga ah ee beeraha ayaa noo oggolaanaya inaan kobcinno baradhada aan fayraska lahayn oo aan ku kaydinno dabaqyada baradho casri ah ilaa la beero.
Shirkaddu waxay leedahay sideed bakhaarro waaweyn oo awood u leh 17 tan iyo sagaal xarumood oo weel lagu keydiyo oo loogu talagalay baradhada abuur oo ay guud ahaan awood u leeyihiin kaydinta 500 tan. Intaa waxaa u dheer, beertu waxay leedahay 20 oo tan oo weel keyd ah, oo ay ku jiraan saddex xarumood oo lagu keydiyo iyo aqoon isweydaarsi.
Laga soo bilaabo sanadkii 2015, Aksentis LLC waxay ka shaqeyneysay sheybaar loogu talagalay faafinta microclonal iyo shaybaar sanadka soosaarka baradho baradhada deegaanka cimilada aan caadiga ahayn. Shaybaarka wax soo saarka ee digriiga yaryar waxaa ku qalabeysan qalab casri ah oo ay leedahay shirkadda American CETS-phytotrons.
Bishii Agoosto 2019, Aksentis wuxuu bilaabay dhisme lagu koriyo oo loogu talagalay soosaarista baradho baradho ah. Ilaa hadda, awoodda naqshadeynta dhismaha ayaa ah 650 minicubers sanadkiiba.
Ilaa iyo bishii May 2015, Aksentis LLC wuxuu wakiil rasmi ah u ahaa Xarunta Sayniska iyo Xarunta Cilmiga ee Xarunta Akademiyada Qaranka ee Sayniska Belarus ee baradhada iyo Xaragada ee Xiriirka Ruushka.
Iyada oo ay weheliso soosaarka baradho, Axentis LLC waxay ku hawlan tahay soo saarista hadhuudhka (sarreenka iyo guga, galley) iyo dalagyada calafka leh (galley, sanadle iyo geedo geedo). Dhismaha xoolaha, oo la furay 2014, ayaa sidoo kale si guul leh ku soo kordhay gudaha Voronino. Khaas ahaan kuwa adag, 110 Hereford oo ka socda Australia ayaa la soo bandhigay. Awoodda naqshadeynta - 600 oo madax ah hilibka xoolaha. Xaruntu waxay leedahay maqaamka canaantu taranka.
160 ha ka yar baradho sanadkii 2020
Beeraha waxaa la aasaasay 1991-kii tuulada Sliznevo, gobolka Arzamas, laga soo bilaabo markii la asaasay ilaa maanta, madaxa beerta waa Anatoly Pavlovich Yalin. Shirkadda waxay ku bilaabatay waxqabadkeeda dalagyada soo kordhaya. Sanadkii 1995, baradhada ayaa la beeray markii ugu horeysay (aag 1 ha ah, iyadoo la isticmaalayo aaladda loo yaqaan SN4B planter iyo digtoorka wiish Polish-ka ah). Sannadkii 1998kii, waxay ka iibsadeen hargester-kii ugu horreeyay oo ay la socdaan rakhiis - SE 75-40 oo laga keenay GRIMME.
Maanta, beertu waxay leedahay 900 hektar oo dhul ah, oo 160 hektar ay ka hooseeyaan baradhada (130 hektar oo ka hooseeya waraabinta). Baradhada waxaa ka goostay GRIMME SV 260 iyo SE 75-55 isku darka. Shirkaddu waxay leedahay qalab lagu keydiyo oo casri ah: garoon weyn oo leh 7 tan oo leh hawo iyo qaboojiye 000 oo tan ah.
Anatoly Pavlovich Yalin waxay si firfircoon ugu hawlantahay hagaajinta tuulada Sliznevo. Wuxuu ku siiyaa kaalmo dhaqaale iskuul maxali ah, wuxuu kaqeyb qaatay dhismaha wadada, sidoo kale, wada jir ah, tuulooyinka, waxay dhisayaan macbud ku yaallo naadiga naadiga.
Waxay ku taalaa tuulada Peshelan, degmada Arzamas. Madaxa shirkada, Viktor Aleksandrovich Breev, wuxuu bilaabay inuu ku beero baradhada sanadkii 2000, waqtigaas wuxuu heystaa shirkad Belarusiyaanka ah ee MTZ 80 iyo qodaal laga soo bilaabo xilligii USSR.
Maanta beeruhu waa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn wax soo saarka baradho ee gobolka. Goobaha wax lagu kaydiyo ee leh awood dhan 20 oo tan ayaa ku yaal saldhiga shirkada. Ku dhawaad ​​kalabar dalaga loo dhigay kaydinta (000 oo tan) ayaa la dhigayaa qaboojiyaha, taasoo suurta gal ka dhigaysa in la iibiyo baradhada ku dhawaad ​​sanadka oo dhan.
Shirkadda waxay leedahay duulimaadyo cusub oo casri ah oo qalab ah, oo ay ku jiraan mashiinno baradho 4-iyo 8-saf oo beero ah oo qaadada iyo nooca suunka, kuwa goos goos ah ee baradhada baradhada, qalabka bakhaarka casriga ah ee sumadda GRIMME, iyo sidoo kale qalab lagu maydho oo baakadaha lagu diyaariyo.
Dhammaan aagagga ka hooseeya baradhada beerta waxaa ku qalabeysan aaladda waraabka, taas oo u oggolaaneysa in la helo dhalmo joogto ah oo 50 t / hektar ah. Geedi socodka waraabinta oo dhan ayaa si otomaatik ah loo fuliyaa isla markaana la fuliyaa iyada oo aan faragalin bini aadanimo la samayn. Howlaha oo dhan waxaa laga kormeeraa xafiiska shirkadda.
Xallinta casriga ah ee la soo bandhigay waxay u oggolaaneysaa in beertu ay soosaarto kuna keento baradhada tayada sare leh silsiladda tafaariiqda.
Beerta waxaa ku yaal Peshelan, gobolka Arzamas. Shirkadda waxaa madax u ah Ivan Sergeevich Labzin.
Beerta waxaa la aasaasay sanadkii 1992-kii Sergey Alexandrovich iyo Margarita Ivanovna Labzin - oo ah waalidiinta hogaamiyaha hadda. Shaqadu waxay ku bilaabatay 3,14 hektar oo dhul ah, qorsheeye Soofiyeeti iyo qodista Polish. Ilaa 2002, I.S. Labzin wuxuu si firfircoon ugu lug lahaa horumarinta agribusiness qoyska, iyo tan iyo 2008 uu madax ka ahaa.
Tartiib tartiib, dhaqaaluhu wuxuu kordhiyay mugga beero wuxuuna cusbooneysiiyay diyaaradda qalab. Waqtigan xaadirka ah, shirkada waxaa loo arkaa mid ka mid ah kuwa ugu qanisan nidaamka wax soo saarka Beeraha Arzamas. Waxaa lagu gartaa agabkeeda casriga ah iyo qalabkiisa farsamada, teknoolojiyadda beeraha ee ugu dambeysay iyo heer saadka sare.
150 ha ka yar baradho sanadkii 2020
Beertu waxay saldhig u tahay tuulada Old Ivantsevo, degmada Shatkovo. Madaxa waa Alexander Anatolyevich Dormidontov.
Wuxuu bilaabay inuu ku beero baradhada 2002 ilaa 5 hektar. Sanadkii 2008, wuxuu abaabulay beero: waqtigaan, dhulka ka hooseeya dalaggan wuxuu koray illaa 15 hektar. Hadda shirkaddu waxay u qoondeysaa 150 hektar baradho iyo 1500 hektar oo hadhuudh ah.
Beeritaanka baradho, qalab casri ah oo loo yaqaan 'GRIMME' ayaa loo isticmaalaa, kaas oo fure u ah natiijooyinka aadka u wanaagsan: dhaliddu waxay gaaraysaa 40-50 tan halkii hektar. Sanad walba, dhaqaaluhu wuxuu soo bandhigaa dhulkii burburay wareegii, sidaas darteedna wuxuu kordhiyaa aaggii lagu beeray.
Tags: 2020 .2beeraha baradhadaGobolka Nizhny NovgorodQalabka GRIMME